Mamwe Matambudziko 6 Anotevera | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Kabiye Kabuverdianu Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Mamwe Matambudziko 6 Anotevera
Mozisi naAroni vakaenda kunoudza Farao mashoko avakanga vaudzwa naMwari ekuti: ‘Kana ukaramba kuti vanhu vangu vaende, ndichatumira mbuo [kana kuti mazinhunzi anoruma vanhu] panyika.’ Mbuo dzakawanda dzakabva dzatanga kupinda mudzimba dzevaIjipiti vese, vapfumi nevarombo. Nyika yese yakazara nembuo. Asi munzvimbo yeGosheni, maigara vaIsraeri makanga musina mbuo. Kutangira padambudziko iri rechi4, matambudziko akanga ava kungoitika kuvaIjipiti chete. Farao akachema-chema achiti: ‘Ndikumbirireiwo kuna Jehovha kuti abvise mbuo idzi. Uye vanhu venyu vanogona kuenda.’ Asi Jehovha paakabvisa mbuo dziya, Farao akabva achinja pfungwa. Farao aizombodzidza chidzidzo here?
Jehovha akati: ‘Kana Farao akasaita kuti vanhu vangu vaende, zvipfuwo zvevaIjipiti zvichatanga kurwara zvofa.’ Mangwana acho, zvipfuwo zvakatanga kufa. Asi zvipfuwo zvevaIsraeri hazvina kufa. Kunyange zvakadaro Farao akangoramba achiomesa musoro, uye akaramba kuti vaende.
Jehovha akabva audza Mozisi kuti adzokere kuna Farao uye amwaye madota mumhepo. Madota acho akapfumbuka akazara pavaIjipiti vese uye akaita kuti vaIjipiti pamwe chete nemhuka dzavo vaite mamota anorwadza. Kunyange zvakadaro, Farao akaramba kuti vaIsraeri vaende.
Jehovha akatumazve Mozisi kuna Farao kuti anomuudza kuti: ‘Uchiri kurambidza vanhu vangu kuti vaende here? Mangwana, chimvuramabwe chichanaya panyika.’ Mangwana acho, Jehovha akatumira chimvuramabwe, mabhanan’ana uye moto. Kwakaitika dutu rakaipisisa risina kumbobvira raitika muIjipiti. Miti yese pamwe chete nezvirimwa zvakaparara, kunze kwezviya zvakanga zviri kuGosheni. Farao akati: ‘Kumbira Jehovha kuti abvise dambudziko iri! Mobva maenda henyu.’ Asi chimvuramabwe nemvura yacho pazvakangopera, Farao akaramba kuti vaende.
Mozisi akabva ati: ‘Iko zvino mhashu dzichadya zvirimwa zvese zvisina kuparadzwa nechimvuramabwe.’ Mhashu dzakawanda chaizvo dzakadya zvese zvakanga zvasara muminda uye pamiti. Farao akachema-chema achiti: ‘Kumbira Jehovha kuti abvise mhashu idzi.’ Asi kunyange Jehovha paakabvisa mhashu dzacho, Farao akangoramba akaoma musoro.
Jehovha akaudza Mozisi kuti: ‘Tambanudzira ruoko rwako mudenga.’ Ipapo ipapo, kwakabva kwaita rima risingaiti. VaIjipiti vakaita mazuva matatu vasingakwanisi kuona chero chii zvacho. VaIsraeri chete ndivo vaiva nechiedza mudzimba dzavo.
Farao akabva ati kuna Mozisi: ‘Iwe nevanhu vako munogona kuenda. Asi zvipfuwo zvenyu hazvisi kuenda.’ Mozisi akati: ‘Tinofanira kuenda nezvipfuwo zvedu kuti tinozvibayira sezvipo kuna Mwari wedu.’ Farao akatsamwa chaizvo. Akashevedzera nehasha achiti: ‘Ibva pano! Ndikakuona futi, ndinokuuraya.’
“Muchaonazve kusiyana kwakaita munhu akarurama nemunhu akaipa, nekwakaita munhu anoshumira Mwari neasingamushumiri.”​—Maraki 3:18
Mibvunzo: Jehovha akaunza mamwe matambudziko api? Akanga akasiyana papi nematambudziko 3 ekutanga?
Mosesi naAroni vakaratidza ushingi pavakataura naFarao aiva nesimba. Dhaunirodhai nyaya idzi paIndaneti modzikurukura semhuri.